China LED Electronic Shift Handle mveliso kunye nabenzi | MaiKaiLa
Ngokusekwe kwi-BMW 7 Series gearshift yokubamba isibambo sokuvula, esisebenza kuthotho olu-1 lweecandelo ezintathu, uthotho lwe-2 lokuhamba, i-X1 kunye ne-X2. Umbala wokuqala womboniso wesikhombisi sokukhanya.
Ngokwe-1 yoqobo: iplagi yokuvelisa kunye ne-slot eyi-100% epheleleyo, kusetyenziswa inkqubo ye-BMW OEM kunye nenkqubo ye-BMW yoqobo ye-chrome yokuhombisa, uqhagamshelo olungenamthungo, ubomi obude, ukukhanya okude. Inkxaso yesikhumba, zive ukhululekile, lonke utshintsho lufana nokuzichukumisa, ukhululekile ngaphandle kwenkcazo. Ukuhambisa ukuchaneka kunye nokuzonwabisa kokuqhuba
Iimodeli ezifanelekileyo: iBMW 1 Series Sedan, 2 Series Travel, X1, X2
Iqulethe oku kulandelayo: Isibambo sokutshintsha imoto kwe-LED, ukutshintsha kwemoto intonga emfutshane, igrisi, ukulungisa umsesane wamaqhekeza amane xa uwonke.
Ukuvulwa komngundo ngokusekwe kwi-BMW 5, 7 Series Shift Handle, efanelekileyo i-1 sedan series, ii-2 zohambo lokuhamba, i-X1 kunye ne-X2.
Sisebenzisa umbala wokuqala, isibane sesibonakaliso sokubonisa izixhobo, sisebenzisa kunye ne-BMW yomgangatho wokuqala we-chrome yokuhombisa. Zonke iimveliso zokwenza kwethu zi-1: 1 eziveliswe ngokwemveliso yoqobo ye-BMW. Iplagi inokuhambelana ngokupheleleyo kwaye ifake isokethi ye-BMW kwaye izinto kunye nokubonakala zi-100% ngokufanayo kunye nokunyaniseka.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, sinelungelo elilodwa lomenzi we-BMW Crystal Automotive Shift Handle ngelixa i-BMW yona ingenayo. Ngokwenyani sinawo onke amalungelo awodwa omenzi weemveliso zethu.
Egqithileyo Isiphatho seCrystal Automotive Shift
Okulandelayo: Iqhosha le-BMW Crystal Start